पुष २०, २०७६, आइतबार
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबार सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला १ हजारले बढेर प्रतितोला ७५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो ...
हेर्नुहोस् कति छ आज सुनको मूल्य ?
काठमाडौँ । आज (बुधबार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर छ। आज छापावाला सुन प्रतितोला ७३ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो पनि छापावाल सुन यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो।...
बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?​
काठमाडौँ । आज मंगलबार सुनको मूल्य बढेकाे छ । आज छापावाला सुन ७३ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजावी सुन प्रतितोला ७३ हजार २ सय मा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदी १० रूपैयाँले बढेर ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको ...
घट्यो डलरको भाउ , हेर्नुहाेस् कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज (मंगलबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ भने केहीको बढेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकेको छ। त्यस्तै ...
पुष १४, २०७६, सोमबार
काठमाडौँ । आज साेमबार सुनको स्थिर छ । आज छापावाला सुन ७३ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजावी सुन प्रतितोला ७३ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदी ५ रूपैयाँले बढेर ८ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचा...
हेर्नुहोस् कति छ आजकाे सुनको मूल्य
काठमाडौँ । आज आइतबार सुनको स्थिर छ । आज छापावाला सुन ७३ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजावी सुन प्रतितोला ७३ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदी ५ रूपैयाँले घटेर ८ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँ...
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?​
काठमाडौँ । आज शुक्रबार सुनको बढेको छ भने चाँदीको स्थिर छ । आज छापावाला सुन ७३ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजावी सुन प्रतितोला ७३ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदी ८ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको ने...
हेर्नुहाेस आजको विनिमयदर
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको सटही दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरीकन डलरको खरीददर ११३ रुपैया ८० पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैया ४० पैसा तोकीएको छ। यस्तै युरोपीयन युर...
बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
पुष ०७, २०७६, सोमबार
काठमाडौँ । आज पुस महिनाको ७ गते अर्थात् सोमबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ। आज छापावाल प्रतितोता ७१ हजार ९ सय तथा तेजावी सुन ७१ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज चाँदीको...
हेर्नुहोस् आजको विनिमयदर, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज ९आइतबार० अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर स्थिर छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ १० पैसा तोकेको छ। त्यस्तै आज साउदी रियाल ए...
आज आइतबार हेर्नुहोस् कति छ सुनको मूल्य
काठमाडौँ । आज पुस महिनाको ६ गते अर्थात् आइतबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। आज छापावाल प्रतितोता ७१ हजार ६ सय तथा तेजावी सुन ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज चा...
आज शुक्रबार हेर्नुहोस् कति छ सुनको मूल्य
काठमाडौँ । आज पुस महिनाको ४ गते अर्थात् शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। आज छापावाल प्रतितोता ७१ हजार ६ सय तथा तेजावी सुन ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज च...
काठमाडौँ । साताको पाँचौ दिन अर्थात बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर छ। आज छापावाल प्रतितोता ७१ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो पनि छापावाल सुन यही मूल्यमा कारोबार...
काठमाडौँ । साताको चौथो दिन अर्थात बुधबार पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ केही बढेको छ। आज छापावाल प्रतितोता ७१ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ७१ हज...
आज डलरको मूल्य घट्यो, कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज (बुधबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ भने केहीको बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ८६ पैसा तोकेको छ। त्य...
हेर्नुहोस् आजको विनिमयदर,कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । आज (मंगलबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकेको छ। त्यस्तै आज साउदी रियाल एकको ...
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । साताको तेस्रो दिन अर्थात मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ केही बढेको छ। आज छापावाल प्रतितोता ७१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ७...